Maxay Daawooyinka Dheellitirnaa? - Caqli-gal ah Muuqaalka
Dhiirigelinta SQL waa unug caan ah, kuwaas oo jilayaasha ugu caansan ay heli karaan ilaa maanta. Weerarkanwaxay halis gelin kartaa ammaanka iyo asturnaanta isticmaalka internetka. Waxay isticmaashaa nuglaanta ee bogga internetka oo soo bandhigaya dalool ammaan,khadadkee hack-ka ah ayaa heli kara keydka macluumaadka goobta. Laga soo bilaabo fikraddan, waxay qaadataa dadaalka qandhicilayaasha qibradaha leh si ay u helaan asalka iyohelitaanka server ka ah meel fog oo loo marayo shabakad - how to become a mac computer expert. Iyada oo la isweydiinayo 'SQL Injection', mid ayaa awoodi karta inuu ururiyo macluumaadka boggasida magaca isticmaalaha, passwords iyo macluumaadka kaararka deynta.
Luqad loo qaabeeyey Luuqadda (SQL), waa luuqadda barnaamijka, kaas oo u oggolaanaya kombuyuutarsi ay u helaan, u saxaan ama u qoraan xogta server-ka. Dhiirigelinta SQL waxay ka shaqaysaa noocyo gaar ah oo ka mid ah xogta macluumaadka ee server-yada, kuwaas oo soo bandhigaya noocaannuglaanta. Qaar ka mid ah macluumaadka ku xiran weerarkaan waxaa ka mid ah MS SQL Server, Oracle, Access, Filimaker Pro, iyo MySQL. Laga soo bilaabo abarnaamijka aragtida barnaamijka, qaab kasta oo online ah ama sanduuq si loo helo qoraalka qoraalka ah wuxuu bixiyaa fursad ah inuu ku maamulo amar ah serverka. NikChaykovskiy, the Sare Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha, wuxuu sharxayaa in khaniisiinta ay u isticmaalaan halganaantan ku saabsan macluumaadka noocaas oo ay ku gaaraan weeraro badan.
Dhiirigelinta shaqada ee sirta
Website-yada intooda badan waxay taageertaa qaabab ayadoo isticmaaluhu ku dari karo qaar ka mid ah xogta..Tanifursadda waa habka kaliya ee ay macaamiishu ku xiran karaan goobta oo ay helaan qaar ka mid ah baahidooda iyo xalalka jeegga. Beeraha, kaas oo awoodi karau oggolow talooyinka wax-soo-saarka sida kuwaan waxaa ka mid ah foomamka, miisaska, codsiyada taageerada, badhanka raadinta, goobaha faallooyinka, waraaqaha jawaab-celinta, saxiixafoomamka iyo sidoo kale galaan foomamka. Serayku wuxuu akhriyaa xogtan foomamahan oo ah amar, kaas oo u ogolaanaya inuu isticmaalo habka wax ka beddeloin server ah. Farsamooyinka qaarkood si loo yareeyo weerarkan waxay ku lug yeelanayaan xogta macluumaadka foomamka soo galista ka hor inta aysan gaarin serverka.
Weerarrada fayraska ee SQL waxay isticmaalaan fursadan. Waxaa jira halis ah server, taas ooHackers badankood waxay u adeegsadaan in ay fuliyaan noocyo kale oo amar ah oo ku saabsan weerarkan. Dambiileyaashu waxay wax u dhimayaan amniga nambarrada iyagoo soo saari kara kuwo kalenoocyada amarrada ee server. Weerarkani wuxuu soo bandhigi karaa macluumaad qiimo leh sida macluumaadka kasta ee ku jira qaabka qoraalka.Intaas waxaa sii dheer, hacker wuxuu awoodi karaa inuu faylasha faylka gareeyo, soo dejiyo, loona badalo ama la tirtiro faylasha ku jirta server-ka xogtaas. Waawaa muhiim in la isticmaalo lambarka amniga marka la samaynayo website-ka.
Ganacsi kasta oo e-ganacsi ah oo si hufan u shaqeynaya, waxaa loo baahan yahay inuu jiro qaarheerka ku filan ee damaanada ammaanka internetka. Si kastaba ha ahaatee, waxan samaynaa boggaga internetka ee farsamada, kuwaas oo u ogolaanaya ganacsi ama iibsika iibsadaha. Ujeedada hackerku marnaba ma tixgelin, tani waxay ka dhigaysaa nidaamka oo dhan inay nugul yihiin. Dhiirigelinta sigaarka waa mid gaar ahnooca hack, kaas oo ka faa'iideysanaya nugul badan ee codadka bogagga. Kacbiyuutar wuxuu u heli karaa inuu galo server una sameeyo qaar ka mid ah kuwa waaweynjajabka iyo weerarrada. Nooca jilicsani waxa uu ka hortagayaa nabadgelyada bogga internetka, tani waxay ka dhigi kartaa dadaalkaaga SEO-ga. Waxaad awoodi kartaaIsticmaal tilmaan-bixiyahan si looga fogaado weerarrada Weerarka ee SQL ee ku yaal goobtaada. Intaa waxaa dheer, waxaad dareen-celin kartaa macaamiishaada khatarta soo foodsaarta oo haysoiyaga oo ka badbaaday weerarka.